Union Minister U Kyaw Tin accepts credentials from Country Rep of UN Women – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tin accepts credentials from Country Rep of UN Women
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin received Mr. Nicolas Burniat, the newly-appointed Country Representative of UN Women for Myanmar at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw at 11 am, on6March 2019. During the meeting, Mr. Nicolas Burniat presented his credentials to the Union Minister.
After the presentation of credentials, they exchanged views on ways to strengthen cooperation between Myanmar and UN Women and potential supportive measures by UN Women in assisting the ongoing efforts of the Government of Myanmar for the advancement of women in the country.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ (UN Women) ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
(၆-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ (UN Women) ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ Mr. Nicolas Burniat အား ၆-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၁၀ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် Mr. Nicolas Burniat က ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ်ပြီးနောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ အမျိုးသမီးများဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့် အလားအလာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။